Wararka - Taageerada Dhulka Iyadoo La Taaban karo
Nooc cusub oo shub ah oo la buufiyey iyadoo la adeegsanayo isku-darka isku-dhafka ah iyo sibidhka oo lagu daray waxyaabo gaar ah si loo dardargeliyo adkaynta shubka ayaa laga soo saaray Yurub.
Waxaa loo yaqaan “shotcrete” waxay heshay codsi sii kordhaya oo ah hab lagu taageero dhulka qodista dhulka hoostiisa ee Yurub iyo Waqooyiga Ameerika.
Isticmaalkeeda miinooyinka dhulka hoostiisa ayaa inta badan ahayd tijaabo. Waxaa la ogaaday in loo isticmaali karo beddelidda habab badan oo caadi ah oo taageero dhulka ah marka la eego xaaladaha dhulka hoostiisa caadiga ah laakiin in xaaladaha xun, sida talc schist iyo xaalado aad u qoyan, aysan suurtogal ahayn in si guul leh loo adeegsado.
Adeegsiga dhagaxa dhagaxa ah si ay u noqoto taageerada dhulka ee miinooyinka dhulka hoostiisa ayaa la filayaa inay kordho. Sibidh la buufiyey oo leh noocyo caag ah oo wax lagu daro ayaa socda oo laga yaabo inay sii kordhiso baaxadda codsigeeda. Shubka la buufiyey ee la xidhiidha mesh silig ayaa durba helay codsi balaadhan oo ku saabsan qodista dhulka hoostiisa.
Waxaa jiray laba hab oo la isku qasay dhagaxa darran ee isku-darka ah, oo kala ah isku-darka qoyan iyo qallalan-qallalan waxay ku lug leeyihiin isku-darka dhammaan qaybaha la taaban karo ee biyaha iyo bamgareynta isku-dhafka qaro weyn iyada oo loo marayo tuubada gaarsiinta ilaa daloolka, halkaas oo hawo dheeraad ah lagu daro walxaha waxaa lagu buufiyaa dusha mawduuca. Habka qallalan-xix wuxuu oggolaanayaa hordhac sahlan oo ah dardar-geliyeyaasha guud ahaan isku-dar ah biyo-milmi kara, sidaasna lagu dardar-gelinayo hannaanka fuuq-baxa. Waxaa la soo saaray dardar -geliyeyaal awood u siinaya in shubka uu ku dheggan yahay meelaha dhagaxa ah oo ay hoos marin karaan biyo badan.
Mashiinnada isku-dhafan ee qoyan weli lama soo saarin heer ay si ficil ah u maareeyaan isku-darka ka weyn 3/4 in. Mashiinnada noocaan ah ayaa inta badan loo adeegsadaa xasilinta dhulka hoostiisa halkii laga taageeri lahaa dhulka saboolka ah. Mashiinnada noocan ahi waa Gun-All Model H oo run ah, oo ay qaybisay shirkadda qalabka macdanta, taas oo si caadi ah loogu isticmaalo codsiyada dhulka hoostiisa halkaas oo dahaarka khafiifka ah ee shubka ah ilaa 2in. qaro weyn oo leh wadar ahaan qiyaastii 1/2 inji. cabbirka ugu sarreeya ayaa looga baahan yahay xaalad qallalan.
Hawsha Taageerida ee Gaaban
Shotcrete waxaa loo isticmaali karaa qaab dhismeed ahaan ama taageero aan dhisme ahayn. Dhagaxa caagga ah ee daciifka ah iyo carrada aan isku xidhnayn waxay u baahan yihiin adeegsiga qaab dhismeed adag oo karti leh si looga hortago in dhulku furfuro oo ku qulqulo furitaanka. Tan waxaa lagu gaari karaa iyadoo la mariyo 4 ama in ka badan oo inji oo ah muraayad.
Dhagaxyada kartida badan, waxaa laga yaabaa in loo adeegsado kala -goysyada iyo jabka si looga hortago dhaqdhaqaaqyada dhagaxa yar ee kiciya cadaadiska iyo guuldarrooyinka. Dhagaxa dhagaxa ah waxaa lagu dabaqaa 2 ilaa 4 inji dhumucda dhagaxa adag si loo buuxiyo dildilaacyada iyo godadka si loo abuuro meel fidsan oo ku dhow iyo in la tirtiro waxyeellooyinka, codsi khafiif ah ayaa looga baahan yahay meelaha siman. Xaaladdan, shaxanka la taaban karo ee si dhow ugu xidhan wuxuu u shaqeeyaa sidii xabagta si uu u qabto furayaasha iyo jeexjeexyada taageeraya qaybaha waaweyn ee dhagaxa iyo ugu dambayn qaansada tunnel -ka. Codsiga noocan ahi wuxuu ku badan yahay Iswiidhan, halkaas oo naqshadeynta taageerada tunnel -ka ee ku salaysan shotcrete aad loo jecel yahay sababtoo ah waxtarkeeda iyo qiime jaban.
Dhagaxa dhagaxa ah ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa qaab go 'khafiif ah si looga ilaaliyo meelaha dhagaxa dhagaxa ah ee dhowaan la qoday weerar iyo xumaanshaha hawada iyo biyaha. Qaabkan, waa memebrane dabacsan oo joogto ah oo cadaadiska jawigu u dhaqmi karo taageero ahaan.
Isbarbar dhigga Gunite iyo Shotcrete
Dhagaxa qallafsan ee isku-darka ah wuxuu kaga duwan yahay qoriga isku midka ah ee isku-dhafan oo la adeegsado taas oo ah in dhagaxa dhagaxa ahi uu yahay shamiito dhab ah oo ay ku jirto koore (illaa 1.25 inji) dhagaxa wadar ahaan, halka gunite-ku caadi ahaan yahay hoobiye ciid sibidh ah. Dhagaxa dhagaxa ahi wuxuu kaga duwan yahay qoriga xagga adeegsiga iyo u shaqaynta siyaabaha soo socda:
1) Gunite -ku wuxuu u eg yahay inuu sameeyo dabool dhuuban oo dhagaxa ah, laakiin dhagaxa dhagaxa ah haddii si degdeg ah loo adeegsado ka dib marka uu qarxo wuxuu siin doonaa shaabad iyo taageero labadaba si loo dejiyo dhagaxa dhagaxa cusub. Dammaanadda dhagaxa adag ee dhagaxa-adag waxaa loo malaynayaa inay sabab u tahay ficilka iskuxirayaasha xoojinta ee sida gaarka ah u horumarsan oo aan u oggolaanayn inay shubka ka fogaato dhagaxa dhagaxa saamaynta peening ee walxaha waaweyn ee isku-darka ah ee ku jira qaybaha ugu fiican iyo naqshadda mashiinnada gaagaaban ee la isticmaalo.
2) Dhagaxa dhagaxa leh wuxuu adeegsadaa isku -darka weyn (illaa 1.25 inji) oo laga yaabo in lagu dhex qaso sibidh iyo ciid meesha ay ka kooban tahay qoyaan aan lahayn qalajin qaali ah oo inta badan looga baahan yahay qoriga. Waxa kale oo lagu dabaqi karaa dhumucda ilaa 6 inji. Hal baasa, halka gunite -ku ay khasab tahay in lagu xaddido dhumucda aan ka badnayn 1 inji. Sidaa darteed dhagaxa dhagaxu wuxuu si dhakhso ah u noqonayaa taageero xooggan iyo sidoo kale dejiye dhul furan oo adag.
3) Isku -darka soo -dardargelinta ee loo adeegsado ka -hortagga tallaalka ayaa u horseedaysa isku -xidhka dhagaxa, in kasta oo dhagaxa laga yaabo inuu dhab ahaan ka daciifsan yahay shubka caadiga ah ee isku -darrada isku midka ah laakiin leh dardar -yari. Waa biyo-mareen waxaana lagu gartaa xoog hore hore (qiyaastii 200 psi hal saac gudaheed), sababtuna ma aha oo kaliya isku-dheellitirka laakiin sidoo kale heerka isku-darka laga helay xawaaraha saamaynta ee 250-500ft. halkii seken. iyo heerka biyaha/sibidhka oo hooseeya (qiyaastii 0.35). Shotcrete, oo lagu daray waxyaalo gaar ah, wuxuu u beddeli karaa dhagaxa xoogga yar mid deggan, oo daciif u ah dhagaxa caagga ah ee lagu buufiyay wuxuu ahaan karaa mid xasilloon oo leh dhowr inji oo keliya oo ah taageerada darbiga. Sababtoo ah sifooyinka gurguuranaya, darxumadu waxay joogteyn kartaa cillad weyn bilihii ama sannadihii iyada oo aan la jabin iyada oo la dillaacay.
Waqtiga dhejinta: Jul-02-2021